Soo dejisan Speedtest 3.2.14 – Vessoft
Soo dejisan Speedtest
Speedtest – software ah si ay u hubiso xawaaraha ee la xiriira internet-ka. Speedtest ku sameeyaan baaritaanka in hab toos ah iyo dhamaystirka ka dib markii jeegga u bandhigayaa warbixin faahfaahsan oo ku saabsan xawaaraha ee la isugu gudbiyo ama dhaweynta xogta laga helay shabakadda si ay u qalab aad. Software waxuu si aad u eegto macluumaadka ku saabsan baaxadda ping, dooran server ka fog iyo reserved ee qaybta cabiraada. Speedtest kuu ogolaanaya in aad si aad u eegto garaafka ah ee la xidhiidha xasilloonida iyo eegan macluumaadka la kormeer hore. Speedtest kale oo ku jira qalab u gudbinta xogta imtixaanka ee shabakadaha bulshada.
Imtixaanka Speed ​​la isugu gudbiyo ama dhaweynta xogta
Choice of server fog
Doorashada oo ka mid ah qaybta cabiraada ee xawaaraha
Muujiya gudaha iyo dibadda IP-address
Muujis of xiriir shabakadda
Speedtest Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... CPU-Z 1.19
English, Українська, Español, Português... Wikipedia 2.0
العربية, English, Українська, Français... 2048 1.2